Yeka Ukuthetha ngeSpan Spans iyancipha, AKUKHO! | Martech Zone
Yeka Ukuthetha ngeSpan Spans iyancipha, AKUKHO!
NgoLwesibini, nge-23 kaDisemba ngo-2014 NgoLwesibini, nge-23 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
Siyawuthanda umxholo onokutya okunokuthenjelwa nje ngomntu olandelayo, kodwa ndiyakholelwa ukuba kukho ukungaboni ngasonye okukhulu kumzi mveliso wethu. Uluvo lokuba Ukuthathelwa ingqalelo kuyancipha idinga umxholo othile ukuba uyijikeleze. Okokuqala, andivumi kwaphela ukuba abantu bachitha amandla amancinci bezifundisa malunga nesigqibo sabo esilandelayo sokuthenga.
Abathengi kunye namashishini achithe ixesha elininzi ngaphambi kokwenza uphando asenza uphando oluninzi ngoku. Ndabaleka kubahlalutyi Iingxelo kubo bonke abathengi bethu Ukulungiselela esi sithuba kwaye nganye nganye inexesha elininzi elichithwe kwiphepha kunye nexesha elininzi elichithwe kwiseshoni nganye xa kuthelekiswa ne-1 okanye i-2 kwiminyaka eyadlulayo. Senza uphando olunzulu kumxholo kwaye sibona ukubuya okungcono kakhulu kutyalo-mali njengoko singena nzulu.
Into etshintshileyo ayisiyiyo ixesha lokujonga, ngumzamo obandakanyekayo ekufumaneni umxholo. Abaphandi ngoku banobuchule ekuchongeni ngokukhawuleza oko bafuna. Ukuba abayiboni, bayahamba. Kodwa ukuba bayayifumana, bachitha ixesha elininzi befunda, bephanda kwaye besabelana ngalo.
Ukuba inkampani yakho ibona ukwehla okubonakalayo okuchithwe ngexesha kwiphepha okanye kwindawo, inokuba ngenxa yezizathu ezininzi:
Izihloko zakho azingqinelani nomxholo wakho. Mhlawumbi usebenzisa iindlela zokuqhagamshela abantu ekutsaleni abantu kwaye umxholo awutyebanga- oko kuyakwenza ukuba nabani na ashiye!
Ubusebenzela umxholo ongalunganga. Ukuba indawo yakho ifunyenwe itoni yokudityaniswa kwamagama aphambili ongenagunya kuwo unokunyusa amaxabiso akho kunye nokunciphisa ixesha elichithwe kwindawo yakho. Bhala kwithagethi- ngalo lonke ixesha!
Ubusazisa ngokwenziwa kwemikhankaso yokukhangela engahlawulwanga kakuhle. Lonke undwendwe olutsha kwindawo yakho mhlawumbi liza kuchitha ixesha elincinci kunabantu ababuyayo. Ukuguqula amaphulo kunokuba nokuncipha kwesihlobo kwindawo njengoko iindwendwe ezintsha zifumana (okanye zingafumani) izinto eziyifunayo.
Awutyali mali kwizicwangciso zomxholo eziqhuba ukubandakanyeka nzulu- njenge-infographics, imiboniso, ii-ebook, amaphepha amhlophe, izifundo zetyala, ubungqina, iividiyo ezichazayo, izixhobo ezisebenzisanayo, njl.
Umxholo ongenakuthathwa ayisosicwangciso sokuhambisa kuba ixesha lokujolisa liyancipha (ayisiyiyo!). Umxholo onokutya okulula kukutya okukhokelela abantu kwindawo yakho kwizihloko ezifanelekileyo ukuze bakwazi ukufumana ukuzibandakanya okunzulu kulwazi abalufunayo.
Ndingakucela umngeni ukuba uqhube uhlalutyo lokuguqulwa kunye nexesha kwiphepha okanye indawo kwaye uyakufumanisa ukuba umxholo oguqukayo usisiqulatho sefomu ende. Uphando oluphambili, amaphepha amhlophe, izifundo zamatyala kunye neenkcukacha, iiposti zebhlog ezityebileyo ziyaqhubeka ukuqhuba itoni yokuzibandakanya kwaye kukhokelele kuguquko.
Ukuphuhlisa eyakho isicwangciso sokuthengisa kufuneka ibandakanye umxholo wokwakha kumanqanaba ohlukeneyo okuzibandakanya ukuze, njengoko umthengi okanye ishishini liba nomdla ngakumbi, banokuntywila nzulu kuphando abalifunayo.
Umxholo ongenakutyiwa unendawo yawo, kodwa ayisiyonto emfutshane yokuqwalaselwa. Kungenxa yomzamo omncinci kunye nabaphulaphuli ababanzi wokutsala iindwendwe nzulu! Kukukorobha amanzi ngelixa isilingo sokwenene silinde phambili kwithagethi yakho.
Unoko engqondweni, le infographic evela kwi-Oracle inokuqonda okuhle malunga neendlela zokutya ezinokutya.
tags: kwi-infographicOracleUmxholo onokutya okululaixeshaixesha kwiphephaixesha kwisizaixesha elichithwe kwiseshoniixesha elichithwe kwiphephaixesha elichithwe kwindawo
Ukunyuka koTyelelo lwale mihla lweSelfowuni
Amanani entengiso ka-2014 avela kwiNtengiso yeNtengiso yeLifu
Ngomhla wama-24 ku-Disemba 2014 ngo-8: 59 AM
Ndixolile kukuva ukuba iindwendwe zewebhu zichitha ixesha elininzi zifunda amaphepha omxhasi wakho kunokuba kwakunjalo kwiminyaka eyi-1 ukuya kwemi-2 eyadlulayo. Kwihlabathi lanamhlanje lokulunywa kwezandi, oko kubonisa kakuhle kuthi thina bakholelwa ekutyaleni ixesha lokudala umxholo ocingisisiweyo, ophandwe kakuhle!
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2014 ngo-9: 56 AM
Oku kuqaqambileyo! Ndiyavuya kakhulu ukubaluleka kolwazi-olutyebileyo, umxholo wefomu ende awukanciphi.
Ndiyayithanda xa umntu esenza ibango elikhethekileyo nelinesibindi elicela umngeni kwiingqikelelo ezidumileyo